Indlela yokwazi ukuba isithuthi sakho sinokukhumbula
Ngazo zonke iindaba ezibetha i-airwaves kunye ne-intanethi ngokukhunjulwa kwiminyaka embalwa edluleyo, akumangalisi ukuba unenkxalabo malunga nokuba imoto yakho inokuthi uyikhumbule kuyo. Ngoko, uhamba njani ngokufumanisa ukuba imoto yakho okanye iloli ibikhunjulwe? Abanye abakhumbulayo banzulu. Imoto ekhunjulwayo ngenxa yokuba inkqubo yokuqhawula isenokubamba umlilo kufuneka iphendulwe ngokukhawuleza.
Kule meko, ngokuqhelekileyo inqanaba elomeleleyo lemizamo eyenziwa ngumenzi wezithuthi ukudibanisa bonke abanikazi bezithuthi ezichaphazelekayo ukuba bazise ukuba kukho ukukhumbula okukhuselekileyo ukukhumbuza. Oku kuvumela bonke abanikazi bamanje bezithuthi ngxaki yokukhusela ingxaki bazi ukuba kufuneka bathathe inyathelo ngokukhawuleza. Kodwa kuthekani ukuba imoto yakho ibandakanyeka khumbula kangako?
Iimoto kunye neloli ezibandakanyeka ekukhunjuleni okungathí sina kusadingeka zilungiswe, kodwa umgudu owenza abenzi bemoto ukuvumela abanikazi bamanje ukuba baya kuba ngaphantsi komcimbi omkhulu wokhuseleko. Ngokomzekelo, masithi imoto yakho inenkinga ebandakanya i-latch trunk edibeneyo. Ukuba ingxaki isasazeke ngokwaneleyo, umenzi unokugqiba isigqibo sokuba ukukhumbula kuyimfuneko. Iimoto ezikhunjulwayo ziza kulungiswa i-trunk latches ngaphandle kwenkokhelo nayiphi na isebe lenkonzo yabathengisi. Umenzi akayi kuyenza umgudu omkhulu wokudibanisa nabanikazi bamanje bezithuthi ezichaphazelekayo.
Baya kunceda bakhululwe i-bulletin yenkonzo kumasebe enkonzo yomthengisi ebazisa ukuba baya kuhlawulelwa ngokulungisa nayiphi na i-latches egxile kwiimoto ezichaphazelekayo. Ngamanye amaxesha amasebe enkonzo yomthengisi aya kudlulisela le ngcaciso kubo bonke abathengi bawo, kodwa kaninzi ayikho ndawo.
Ngoko ukhangeleka phi ukuba ukhangele ukuba kukho na ikhona ekhunjulweyo kwimoto okanye iloli? Umthombo osisigxina, ngokude, yi-arhente karhulumente ephethe ukukhunjulwa, i-National Transportation Transportation Administration Administration, eyaziwa nangokuthi yi- NHTSA . Banikezela umnxibelelwano ngqo kwingxenye yesayithi e dwelisa imoto yakho.
Ngamanye amaxesha isithuthi siya kuba neengxaki ezinkulu ezichaphazela ipesenti enkulu yeemoto okanye iilori eziveliswe ixesha elithile. Ngokomzekelo, imodeli ethile eyakhiwe phakathi kuka-2012 no-2014 ingaba i-rotors ebolekileyo eyenziweyo esebenzisa isezantsi kunebakala elimkelekileyo lensimbi. Ngenxa yoko, inani elikhulu lalabo bajikelezileyo baqala ukuguqula ixesha lokushisa. Abaninzi baye bahlukumeza, enyanisweni, ukuba kuyacaca kumvelisi wemoto ukuba yinto nje yexesha ngaphambi kokuba ininzi yokujikeleza i-rotors kwinqanaba elichaphazelekayo lihlaselwe. Esikhundleni sokunyanzelisa abathengi babo abathembekileyo ukunyathela ibhilikhwe, imoto okanye umenzi weloli iya kukhupha isikhumbuzo. Esi sikhumbuzo siya kunikezela ukulungisa nayiphi na imoto okanye amaloli kuloo nyaka uhlu ngokufaka i-rotors ye-freake mahala.
Kuthekani ukuba imoto yam ikhunjulwe?
Ukuba ufumene ukuba isithuthi sakho sikhumbula, indawo efanelekileyo ukuba uya kuyo iya kuba yisebe leenkonzo ezikufutshane.
Ngelixa lisoloko lona khetho olulungele ukulungiswa rhoqo, isebe lenkonzo liya kuba yindawo elula kakhulu kunye neyona ndlela efanelekileyo yokukhumbula umsebenzi wakho. Baya kuba nako ukujonga iNombolo yeNgcaciso yeMoto ukuxelela ukuba isithuthi sakho sichaphazelekayo.
I-World Century Architecture kwi-One Book?